Samsung Galaxy Note 10 Pro ga-eru 4.500 mAh | Gam akporosis
Batrị abụrụla otu n'ime ebe ọrụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ achọpụtabeghị ngwọta dị irè nke na-aga n'ihu na-amanye ha ka ha nwekwuo ikike iji nwee ike inye nnwere onwe ezi uche, na mgbakwunye na mmejuputa mmezi na sistemụ arụmọrụ (nke Google nwere ọrụ maka ya) na ịmepụta ndị nrụpụta nke ọma (Qualcomm n'ọtụtụ ọnọdụ).
Galaxy S10 ohuru bu ihe akaebe banyere nke a, ya na ikike batrị n’ime uzo abuo nke ato ya. karịrị ihe anyị nwere ike ịchọta na Galaxy S9 na S9 +. Ihe ọzọ dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta, Galaxy Note 10 ga-ahụkwa ka batrị ya mụbara, ọkachasị ụdị Pro ga-eme ya ruo 4.500 mAh, ya mere 4.000 mAh nke Galaxy Note 9.
Ee, anyị na-ekwu maka Galaxy Note 10 Pro. O doro anya na ụlọ ọrụ Korea na-eme atụmatụ malite ụdị dị iche iche nke Galaxy Note 10. Abụọ ga-ejikwa 4G modem jikwaa abụọ ọzọ na 5G modem. Abụọ n'ime ha ga-eji ihu 6,28 nke anụ ọhịa kụọ ahịa, ebe mbipute Pro ga-eme ya na ihuenyo 6,75-inch. Ihuenyo a ga-adaba na ụdị Pro.
O doro anya na Samsung chọrọ ndetu akara iji rute ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa, dị ka S10 nso, yabụ mwepụta nke S10e, dị ọnụ ala karịa mana ọ nwere otu atụmatụ ndị anyị nwere ike ịchọta na ọdụ abụọ ndị ọzọ bụ akụkụ nke S10.
Igwe batrị nke Galaxy Note 10 Pro agbapụla mgbe ngwaọrụ a a kwadoro ya site na South Korea Industrial Institute of Technology, ma gosiputara anyị otu akara ngosi ga-abụ EB-BN975ABU nke kwekọrọ na ụdị 4G NJ-975.
Nhazi nke Samsung Galaxy Note 10
Ihe ngosi Galaxy S10 weputara ohuru ohuru ebe ihu ya nile bu ihuenyo, na ebe anyi nwere ike ichota otu ese foto abuo ma obu abuo n’udi nke agwaetiti. Nke a ga-afọ obere ka ọ bụrụ otu imewe ahụ Samsung ga-eme na ọgbọ ọhụrụ Rịba ama 10, ọgbọ ọhụrụ nke a ga-ewepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume puru iche na August ma rute ahịa na mbido September.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung Galaxy Note 10 Pro ga-eru 4.500 mAh
[APK] Etu ibudata ES File Explorer PRO (Ọ dịghị na Storelọ Ahịa Play)